Famaranana ety ivelany - Pandawill Technology Co., Ltd.
Mba hahatratrarana ny zava-bita tsara indrindra amin'ny fivorian'ny fiangonana dia mila ampifanarahina amin'ny famaranana azo apetraka tsara indrindra amin'ny fizotranao sy ny fizotranao.
Mba hanomezana fahafaham-po ny fitambaran'ny mombamomba ny fiangonana, ny fampiasana ara-pitaovana ary ny fangatahana fangatahana, dia manolotra ireto karazana famaranana azo amboarina manaraka ireto izahay:
✓HASL notarihin'ny nentim-paharazana
✓HASL tsy misy firaka
✓Immersion Gold over Nickel (ENIG), ampidiro ny volamena mafy
✓OSP (Preservative Solderability Organika)
✓Tondro volamena, pirinty karbaona, S / M azo volena
✓Volamena (Volafotsy volamena mafy)
✓Sarontava solder: maitso, manga, mena, mainty, mavo, fotsy no misy
✓Saron'ny lamba landy: fotsy, manga, mena, mavo, mainty, maitso no misy
Faly izahay manome hevitra anao ny farany mety indrindra mifototra amin'ny lafin-javatra maro ao anatin'izany ny fiainana talantalana, fanomezana fiheverana, topografia an-tampon'ny, fivorian'ny varavarankely misokatra eo anelanelan'ny fizotrany ary mazava ho azy fa ny vidiny.
Ny takelaka rehetra atolotra dia misy tatitra momba ny kalitao feno izay mamaritra ny famaritana ny takelaka misy ny zana-kazo raha ilaina izany izay maneho ny halalin'ny fisalobanan'ny sosona anatiny amin'ny alàlan'ny fametahana lavaka sy ny fitsaboana eo ambonin'ny tany.
Pandawill koa dia manolotra loko maro karazana sy famaranana saron-tava solosaina (gloss na matte) mba hifanaraka amin'ny volanao. Raha ny ankamaroan'ny PCB dia amboarina amin'ny indostrialy maitso, manolotra fanoherana fotsy sy mainty mena, manga, mavo, mazava sy mamirapiratra izay be mpampiasa amin'ny fanamboarana ny jiro miorina amin'ny jiro koa izahay mba hanehoana na hanakanana ny jiro manodidina. Ireo loko rehetra voalaza etsy ambony dia atolotra tsy andoavam-bola ary ny inks ampiasaina dia namboarina mba hanolorana ny haavon'ny loko sy ny fanoherana ny fahalavoana sy / na ny fiovan'ny loko rehefa voahodina.